VIDEO ။ TPMP: ခရစ္စတင်းကယ်လီကတယ်လီဖုန်းလိုင်း၏ပစ်မှတ်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် »ဗွီဒီယို။ TPMP: ခရစ္စတင်းကယ်လီကပစ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတာထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
VIDEO ။ TPMP: ခရစ္စတင်းကယ်လီကပစ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတာထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
ဘာလဲ အကြီးမားဆုံးကြောက်စိတ် de ခရစ္စကယ်လီ ? တွင် TPMP အောက်တိုဘာ9ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်သတင်းထောက်သည်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောဇာတ်လမ်းနှစ်ခုကိုဖော်ပြခဲ့ပြီး၎င်းတို့အားသတင်းပို့ခဲ့သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးသူမ LCI တွင်အလုပ်လုပ်စဉ် Christine Kelly သည်ဂေါက်သီးစစ်ပွဲအကြောင်းသတင်းကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ လက်တုံ့ပြန်မှုအတွက်, ကွင်းဆက်အတွက်ဂျာနယ်လစ်အားလုံး။ Anthrax နဲ့တူတဲ့အမှုန့်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။. "ဒါဟာဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ထိတ်လန့်ခဲ့ပါတယ်" သူမပြန်ပြောပြသည် နောက်ထပ်နာကျင်သောမှတ်ဉာဏ်နှင့်အနည်းဆုံးတော့ - ခရစ္စကယ်လီ သူမကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြံစည်နေသည့်စိတ်ဖောက်ပြန်သူတစ် ဦး ကအချိန်အတော်ကြာနှောင့်ယှက်ခံခဲ့ရသည်။
"တစ်နေ့မှာ သူသည်ကျွန်ုပ်၏အိမ်သို့ ၃ နှစ်ကြာလိုက်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။။ တစ်နေ့တွင်သူသည် La Poste မှပို့ဆောင်ပေးသူတစ် ဦး အဖြစ်ဟန်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူကကျွန်တော့်အိမ်ရှေ့မှာအစောင့်တစ်ယောက်နဲ့ရောက်လာတယ်။ အဲဒီမှာသူကငါ့အိမ်ကိုထုပ်တစ်လက်နဲ့ရောက်လာတယ်။ ကရှင်းပြခဲ့သည် ခရစ္စကယ်လီ။ သူမကိုနှောင့်ယှက်နေသောသူ၏မျက်နှာကိုသိသောသတင်းစာဆရာ၊ ထို့နောက်ထိတ်လန့်တိုက်ခိုက်မှုများတွင်ဖမ်းမိခဲ့သည်။ : "ငါအော်ဟစ်တယ်၊ ဘယ်လောက်ကြာကြာငါမသိတဲ့အသံမရှိခဲ့ဘူး" သူမကပြောသည်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူကငါ့ကိုပြီးသားဓါတ်ပုံတွေကိုပို့ခဲ့သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာငါသူ၏မျက်နှာကိုသိသည်, ဒါကြောင့်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ထိတ်လန့်ခဲ့သည်။ ငါမဆို packages များချင်ကြဘူး " တွင် Cyril Hanouna အဖွဲ့၏ရာဇ ၀ င်စာရင်းတွင်ပါဝင်ခဲ့သူကိုနိဂုံးချုပ်ခဲ့သည်။ ငါ၏အ post ကိုချွတ်လက်စွဲ နွေ ဦး ရာသီ 2018 ၌တည်၏။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာကသတင်းစာဆရာသည်ပြပွဲအပေါ်မျက်ရည်များကျခဲ့သည်။ ထုတ်ဖော် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေရန်ကြိုးစားခဲ့ ကြောင့်အလွဲသုံးစားမှုကြောင့်။ မိဘများကသူ့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေခဲ့သည်။.
လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်တွင် 1985 ရုပ်မြင်သံကြားညွှန်ကြားရေးမှူး - လူများသေဆုံး